ceb – Gaming Noodle
[Unicode] OG ကို အထင်သေးတာ မခံချင်တော့လို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက် ကစားတာဖြစ်ကြောင်း ပြောသွားခဲ့တဲ့ Ceb TI ၂ နှစ်ဆက် ချန်ပီယံဟောင်းအသင်းဖြစ်တဲ့ OG ရဲ့ ကစားသမားဟောင်း Ceb ဟာ TI9 အပြီးမှာ အသင်းရဲ့နည်းပြအဖြစ် ပြောင်းလဲတာဝန်ယူနေခဲ့ရာကနေ ယခုအချိန်မှာတော့ ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် တစ်ဖန်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ Ceb ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက် OG အသင်းရဲ့ ပရိသတ်များသာမက Dota2ပရိသတ်များအားလုံးပါ ဝမ်းမြောက်ခဲ့ရသလို ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို သိလိုစိတ်များလည်း ဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်။ မကြာသေးမီက ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ OG ရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုအတွင်းမှာတော့ Ceb ဟာ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ Ceb ရဲ့ ပြောကြားချက်များအတွင်းမှာတော့ သူပြန်လည်ဝင်ရောက် လာရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းဟာ …
OG ကို အထင်သေးတာ မခံချင်တော့လို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက် ကစားတာဖြစ်ကြောင်း ပြောသွားခဲ့တဲ့ Ceb Read More »
[Unicode] Ceb နဲ့ Madara တို့ OG မှာပါဝင်လာမယ့် WeSave! ပရဟိတ Dota2 ပြိုင်ပွဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ကြေညာခဲ့တဲ့ WePlay! က ကျင်းပတဲ့ WeSave! Charity Play ပြိုင်ပွဲဟာ ယနေ့ စတင်ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Region6ခုက အသင်း (၄) သင်းစီ ပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီး ဆုကြေးဒေါ်လာ ၁၂၀,၀၀၀ ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Online ပွဲစဉ်ဖြစ်တာကြောင့် Region တူတဲ့ အသင်းအ​ချင်းချင်းသာ ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာပါ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေဖို့ တကမ္ဘာလုံးက အကောင်းဆုံးအသင်းတွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြတာ TI ၂ နှစ်ဆက် ချန်ပီယံ OG လည်း …
Ceb နဲ့ Madara တို့ OG မှာပါဝင်လာမယ့် WeSave! ပရဟိတ Dota2 ပြိုင်ပွဲ Read More »